AHUIKE: Martin Vrijland
Mgbochi ndị na-enye ọgwụ mgbochi bụ ọdịnihu
gbara akwụkwọ AHUIKE	by Martin Vrijland	na 9 February 2016	• 5 Comments
Ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ikwere na nje virus dị na ya bụ ezigbo ihe egwu nye ahụike ọha na eze. Isi mgbasa ozi kachasị na-egosi na ike ịkwughachi na-ekwenye na ị kwenyere ya. Ma o nwere ike ịbụ ihe mkpuchi maka njehie ịgba ọgwụ mgbochi emere na Brazil, bụ ebe ndị inyom dị ime kemgbe 2015 [...]
Iji ọgwụ ọjọọ eme ihe, CBD mmanụ, psychosis na ịda mbà n'obi
gbara akwụkwọ AHUIKE	by Martin Vrijland	na 10 September 2015	• 11 Comments
Mgbe akụkọ niile gbasara ndị gbara ọsọ ndụ na ụdị nchịkọta akụkọ ọ bụla dị iche iche, oge eruola ka iweghachi ihe dị mma. E kwuwerị, ihe ndị a nile bụ akụkọ ọ bụla na-eme ka anyị mata nsogbu ndị dị n'ụwa na atụmatụ ọjọọ nke òtù ikpe ahụ. Akụkọ m na-eweta gị ugbu a bụ [...]
Nleta ha: 2.561.101